Dowlada Soomaaliya oo sharci ka soo sareyso daroogada dalka la keeno – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaDowlada Soomaaliya oo sharci ka soo sareyso daroogada dalka la keeno
Hiiraan Xog, Wasiirka Ganacsiga dowlada Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa wuxuu sheegay inay wadaan qorshe la xiriira sidii iska warqab looga sameyn lahaa alaabaha dalka la soo geliyo.
Wuxuu sheegay in dhawaan wasaaradda Ganacsiga ay sharci ka soo saareyso alaabaha dalka la soo geliyo, si looga hortago waxyaabaha dhibaatada u keenaya shacabka.
Wuxuu sheegay wasiir Maareeye in ardada Soomaaliyeed uu dhibaato badan ku hayo Daroogada la yiraahdo Taabuuga, midaasi ayuu tilmaamay inay wax badan ka qaban doonaan.
“Waxaan kala hadalnay arrimahan golaha wasiirada qeybta arrimaha bulshada iyo dhaqaaha, waxaan ka soo saari doonaa shuruuc, marka ay soo ansixiyaan golaha wasiirada oo hada uu hor yaallo sharcigan”. ayuu yiri wasiirka Ganacsiga.
Ganacsiga Soomaaliya ayaa u baahan dheelitir, isdhaafsi iyo hubinta la xiriirta alaabooynka dalka la soo geliyo, si loo xoojiyo xiriirka ganacsi ee kala dhaxeeya dalalka caalamka.
Dhawaan ayay aheyd markii ciidamada ammaanka ay Dekada Muqdisho ku qabteen Konteenaro Qamri ah, iyada oo intaasi kadib la burburiyay.
DAAWO SAWIRO:- Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo tababar uga furay garsoorayaal ka tirsan maxkamaddaha darajada koowaad iyo labaad